OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » Asoosama Xalayaa Hayyuu Kutaa 10ffaa
Submitted by on June 15, 2011  10:49 pmOne Comment
One Comment » Didha Qana'aa says:	August 5, 2011 at 8:24 am	Baayee galatoomi Amaan Hedatoo. Barreefamni kee gabaabduun kun akkaataa itti uummata Oromoo bal’oo bira itti maxxanfamee ga’u irratti osoo hojjettee; uummanni keenya waan baay’ee akka asoosama gabaabaa kana irraa argatan abdiin qaba. Barreessaa Amaan akkataa itti jalqabdeef fixxe, keessumattuu dhaamsi inni haalaaf yeroo Oromoo itti jiruun walqabsiistee barreessite ka dinqiisifamu. Garuu tarii gochamni asoosamaa kun kan raawwatteef kan irratti raawwate barsiisaa kutaa Oromiyaa tokko keessatti. Akka yaada kootti akka loqonniif tarreefamni isaa waalta’ee, qaaqni qooddatootaa ammoo akkuma naannicha dhimmi kun itti raawwateetti qortee tarii, dubbistoonni barreeffamakee akka salphaatti hubataniif dubbisan gochuu irratti ati akkam agarte? Cimni dandeettii waa qoruu kee ammoo nadoo jechoota muraasa ati hiriirsite irraa yoo daran irratti hojjette hangam yaadakee uumatakeen gahuu akka dandeessu mul’isaatii jabaadhu. Didhaa Qana’aa